လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် POSCO International Corporation သည် ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိ Block A-1 တွင် လက်ရှိ လည်ပတ်ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည် ရွှေသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းတွင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း အဆင့်(၃) စီမံကိန်း (Project Development Phase 3) အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး Woodside Energy (Myanmar) Pte Ltd သည် ရခိုင်ကမ်းလွန်ရှိ Block AD-8 တွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စမ်းသပ်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း (Exploration Drilling) အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းအစီရင်ခံစာများအား ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြလာမှုအပေါ် အများပြည်သူသိရှိပြီး သဘောထားမှတ်ချက်များ ပေးနိုင်ရန် အတွက် အောက်ပါ links များတွင် အစီရင်ခံစာများကို download ရယူနိုင်ပြီး သဘောထား မှတ်ချက်များနှင့် အကြံပြုချက်များ ပေးရန်ရှိပါက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား၍ eia.ecd@ gmail.com သို့ အကြံပြုပေးပို့နိုင်ပါသည်-’’
EIA Report for Exploration Drilling in Block AD-8
EIA Report for Shwe Project Development Phase3in Block A-1
Older PostGreen Finance Sector Consultant position announcement
Newer Post “The consultant will be asked to provide sectoral and economic analyses of different infrastructure sectors and key actors from those sectors currently or potentially looking to operate in Myanmar’s cities. S/he will also generateaset of awareness raising materials targeting these groups, aiming to build engagement inalong-term vision for Green City investment in the project’s four target cities. The objectives of the project are defined under the GCF Green Cities Readiness project that is being implemented by GGGI and Myanmar’s NDA, the Environment Conservation Department, Ministry of Natural Resources.”